Kunconywa uCredo Mutwa ngomhlahlo ‘oshaye emhloleni’ | Ilanga News
Home Izindaba Kunconywa uCredo Mutwa ngomhlahlo ‘oshaye emhloleni’
Kunconywa uCredo Mutwa ngomhlahlo ‘oshaye emhloleni’
Kuthiwa ukunganakwa kwezanusi sekwenze iningi lazo lazithulela ngezibonakaliso
UMNU Credo Mutwa, okusabalele i-video yakhe ezinkundleni zokuxhumana ekhuluma ngempi ye-Iran ne-America.
ISITHOMBE NGABE: UNCENSOREDOPINION
LUSHAYELWE ihlombe ngabanye abelaphi benda-buko ugalagala lwesanusi, uMnu Vusamazulu ‘Credo’ Mutwa (98), oluvakashelwa ngisho ngabantu abaphuma phesheya kwezilwandle ngokushaya umhlahlo okuthiwa uphenduke iqiniso kule nyanga mayelana
Sibi isimo phakathi kwe-USA ne-Iran emuva kokuba ngomhla ka-3 kwephezulu, amasosha ase-USA aqube e-Iraq, adedela amabhomu abulala umkhuzi wezempi (wase-Iran), uMajor General Qasem Soleimani.
Iran isike yaziphindiselela ngokuhlasela inkambi yamasosha ase-USA ese-Iraq.
Ngo-1993, uMnu Mutwa wathula isibonakaliso sokuthi kuyoba nesikhathi lapho i-Islam iyobhonga khona kudume izihosha zamazwe ngamazwe, bese kuqubuka impi phakathi kwezwe eliseMiddle East athi ucabanga ukuthi yi-Iran – ne-USA.
Lo mhlahlo usabalale ezinkundleni zokuxhumana, abantu bemncoma ngokuyihlaba esikhonkosini.
“Kule mpi kuyochitheka igazi eliningi ngaphezu kwempi yangesikhathi sikaSaddam Hussein (owayengumengameli wase-Iraq), ize ikapakele nakwamanye amazwe asenhla ne-Afrika. “I-Iran izohamba iyolanda izithako eziyingozi eChina ezokwenza ngazo amabhomu nezinye iziqhumane eziyingozi,” kusho uMnu Mutwa kule video.
Ekhuluma neLANGA uSolwazi Velaphi “VVO” Mkhize, osanda kuhlonipha uMnu Mutwa ngencwadi, uthe yize bekujabulela ukuthi izinto eziningi ezashiwo yilesi sanusi sezenzekile, ezinye zisazokwenzeka, kodwa babuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo ngenxa yezinto esazisho, abantu bengasifuni.
“Abanye bethi kayikho le nto ayishoyo. Ngisho uhulumeni wethu imbala, wehluleka wukumvikela. Abanye osolwazi babeze babhale imiqulu bephikisa izinto ayezisho, okumnandi wukuthi ezinye zazo zenzeke uMutwa esaphila.
“Akuyena yedwa uMutwa obenaleli bhadi lokunganakwa uma eshaya umhlahlo, kodwa izinto zigcine zenzeka ngempela.
Zikhona nezinye izanusi esinazo esikhathini samanje esezaze zaqoma ukuthula zingaxwayisi ngalutho ngoba kazinakwa,” kusho uSolwazi Mkhize.
Omunye umakadebona kwezokwelapha ngesintu, uMnu Sazi Mhlongo, uthi bayamhlonipha uMnu Mutwa futhi bamchoma uphaphe lwegwalagwala ngemihlahlo yakhe eshaya emhlolweni.
“Ngesikhathi ngihlangana naye okokuqala, ngabona ukuthi yindoda emadodeni eyathwasa ngempela, hhayi le nto esiyenzeka manje ukuthi umuntu anyamalale isonto elilodwa abuye esethi uthwasile esezibiza ngesangoma,” kusho uMnu Mhlongo.
Abantu baphuwulile kwiTwitter bencoma.
Previous articleKUQHUBEKA ICALA LOBEYIMEYA YETHEKU
Next articleUsungulelwe isikhwama sokwakhelwa umuzi umfundi
Kuboshwe ovalele izisebenzi efemini
Omahosha bacela isibonelelo kuhulumeni
iSimanga engcwatshwa ehleli emotweni
Kuboshwe ovalele izisebenzi efemini 30th Mar 2020
Omahosha bacela isibonelelo kuhulumeni 30th Mar 2020
iSimanga engcwatshwa ehleli emotweni 30th Mar 2020
Kusolwa ubunkabi ebulawa yiqulu 30th Mar 2020
bakhalela ithambo ngowomndeni owathunjwa 30th Mar 2020